Communication and Information Management | Mountain Initiative | Ministry of Science, Technology and Environment
Government of Nepal Ministry of Science, Technology and Environment Mountain Initiative
Home » Reports and Proceedings » Communication and Information Management
Interview with Secretary, Ministry of Environment, Government of Nepal (2012/03/15 AD)
नेपालले पर्वतीय राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दैछ
सचिव, वातावरण मन्त्रालय
जलवायु परिवर्तनबारे विश्वका सबै पर्वतीय देशहरूको साझा धारणा निर्माणमा जोड दिने गरी नेपालले चैत २३ र २४ गते जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवाली यो सम्मेलन नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो र रणनैतिक महŒव बोकेको तथा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र गौरवको कार्यक्रम भएको बताउँछन् । औपचारिकता पूरा गर्न र प्रदर्शनका हिसाबमा नभई विश्वका सबै पर्वतीय राष्ट्रहरूले बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण बेहोरिरहेको जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनतर्फ यो सम्मेलनले प्रकाश पार्ने ज्ञवालीको दाबी छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफलमा आफू अनुकूल सशक्त निर्णय गराउन र यो प्रक्रियाको नेतृत्व नेपालले लिनका लागि पनि सम्मेलन अर्थपूर्ण रहेको बताउने ज्ञवाली पर्वतीय मुलुकहरूको नेतृत्व नेपालले लिने बताउँछन् । ज्ञवाली यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनहरू, बीबीसी विश्व सेवा र विश्व बैंकमा समेत यसअघि उनले काम गरिसकेका छन् । पर्वतीय राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन, नेपालको आन्तरिक तयारी र समग्र वातावरणीय क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर सचिव ज्ञवालीसँग संवाददाता विजय देवकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालले पर्वतीय देशहरूको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ, यसपटक नेपालले के मुद्दा उठाउँदैछ ?
नेपाल विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेकामध्ये नेपाल चौथो स्थानमा रहेको देखाएको छ । नेपालको पर्वतीय पर्यावरणीय अवस्थिति यसको मुख्य कारण हो । विश्वकै अग्लो सगरमाथा हिमाल र ८ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइका आधा दर्जन हिमाल नेपालमै छन् । देशको प्रमुख जीविकोपार्जनको आधार अर्थात् कृषि पेसा पर्वतीय पर्यावरणमै निर्भर छ । यसले स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्रका अन्य खम्बाहरूलाई पनि प्रभाव पार्छ । जलसुरक्षा, खाद्यसुरक्षा, जैविक विविधता, ऊर्जा सुरक्षालगायतका विषयमा नेपालको पर्वतीय पर्यावरणले प्रभाव पारिरहेको छ । अर्कातिर, नेपाल अल्पविकसित र निर्धन राष्ट्र हो । त्यस हिसाबले पनि यसका आफ्नै चुनौती र जोखिमहरू छन् । साथै, अवसर र सम्भावनाहरू पनि प्रशस्त छन् । किनकि, हिमालहरू जलभण्डार हुन् । यसको संरक्षण गर्न सकिएमा नेपालको जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन सक्छ भने तल्लो तटीय क्षेत्रका राष्ट्रहरूलाई पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यसैले नेपालले आयोजना गर्दै गरेको यो सम्मेलन नेपालका लागि अवसर पनि हो । नेपालमा ऊर्जा विकासको अधिक सम्भावनाबारे त सबै जानकार नै छन् । स्वच्छ ऊर्जा विकासमा पनि नेपालले काम थालेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाबाट पनि हामीले हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं । यी सबै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै सम्बोधन गर्न÷गराउन यस्ता सभा, सम्मेलन, सन्धि, अभिसन्धि र प्रोटोकलहरूलाई हामीले अपनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल अहिलेसम्म २३ वटा वातावरणीय सन्धि तथा अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र भएको छ । यी महासन्धिहरूले वातावरण संरक्षण तथा संवद्र्धनलाई जोड दिन्छन्, जुन नेपालको पनि स्वार्थ हो । ओजन तह विनाशलाई कम गर्नेदेखि लिएर जैविक विविधता संरक्षणसम्मका प्रोटोकलहरूमा नेपाल प्रतिबद्ध छ । यस्ता सन्धिसम्झौता कार्यान्वयनतर्फ भने नेपाल पछाडि नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्ना कुरा राख्न एक्लै कराएर मात्र पनि केही हुँदैन, त्यसैले, अहिलेका ४८ वटा अल्पविकसित मुलुकसँगै काम गर्दा उपलब्धिमूलक नतिजा आउँछ ।
नेपालको जस्तै साझा चरित्र भएका देशहरूसँग मिलेर आफ्ना कुरा राख्न सकियो भने त्यसको प्रतिफल नेपालले लिन सक्छ । यस्तो साझा चरित्रमध्ये पर्वतीय पर्यावरण पनि एक हो । पर्वतीय जोखिम बोकेका विकसित, विकासोन्मुख र अविकसित सबै पर्वतीय देशहरूसँगै कुरा राख्न यो सम्मेलन हुन लागेको हो । पर्वतीय देशहरूको नेतृत्व नेपालले लिने सम्बन्धमा पनि यो सम्मेलनको महत्व रहन्छ । अर्कातर्फ कोप १५ सम्मेलनमा पनि पर्वतीय देशहरूको मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएकाले यसतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गम्भीर बनाउन नेपालले नेतृत्व लिएर काम गर्ने बताएअनुसार सम्मेलन नेपालमै हुन लागेको हो । पर्वतीय मुलुकमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र यसबाट लिन सकिने लाभबारे एकीकृत धारणा बनाउनु नै सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । यसका साथै आगामी जूनमा हुने रियो सम्मेलनमा पर्वतीय देशहरूको अवस्थाबारे समीक्षा र दिगो पर्वतीय विकासबारे अवधारणा प्रस्तुत गर्न पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ ।
पर्वतीय राष्ट्रहरूको नेतृत्वको विषयमा विवाद देखिएका बेला सम्मेलनमा नेपालले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछ ?
पर्वतीय देशहरूबीच गठनबन्धन निर्माणबारे छलफल हुन्छ । सहमति भए पनि वा नभए पनि छलफलमा यो विषयलाई ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । यद्यपि, अहिले नै त्यसबारे ठोस निर्णय भइसकेको छैन । त्यसकारण, सम्मेलनलाई सकेसम्म सबै पर्वतीय राष्ट्रहरूको साझा थलोका रूपमा नै लिइनेछ । पर्वतीय राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी धेरै विषय छलफल हुनेछन् । यी राष्ट्रहरूको समस्या, समाधानका उपाय र नयाँ सम्भावनाहरूका बारे नै सम्मेलनमा मुख्य छलफल हुनेछ । यससम्बन्धमा सबै राष्ट्रको साझा आवाज निकाल्न नेपालले पहल गर्नेछ । तर सदस्यता वा समर्थनका लागि कडा प्रावधान राखेर गुटबन्दी गर्ने पक्षमा नेपाल छैन । त्यसैले, कुनै प्यानल बनाउने कुरा पनि यो सम्मेलनमा हुँदैन ।
पर्वतीय राष्ट्रबाट हुने उपस्थितिले सम्मेलनको अर्थ राख्छ, यो सम्मेलनमा कुन तहका सरकारी अधिकारीको उपस्थिति हुनेछ ?
मन्त्रीस्तरकै उपस्थिति ठूलो कुरा होइन, तर पनि अहिलेसम्म १० वटा राष्ट्रले मन्त्रीस्तरीय उपस्थिति रहने जानकारी दिएका छन् । अन्य राष्ट्रले पनि समन्वयात्मक रूपमा महŒवपूर्ण उपस्थिति रहने बताएका छन् । हामीसँग झन्डै १ महिना समय बाँकी नै रहेकाले अरू राष्ट्रको सहभागिताबारे विस्तारै निर्णय हुनेछ । छिमेकी मुलुक चीनबाट मन्त्रीस्तरीय उपस्थिति रहनेछ भने भारतले पनि सोही अनुसारको उपस्थिति हुने बताएको छ । भारतबाट मन्त्री नै आउने हाम्रो अपेक्षा छ । दक्षिण एसियाका प्रायः देशबाट मन्त्रीस्तरकै उपस्थिति रहनेछ ।
सम्मेलनका लागि नेपालको कन्ट्री पेपर तयार पार्ने काम कहाँ पुग्यो ?
नेपालले आफ्नो कन्ट्री पेपर तयार गर्दैछ । प्रतिवेदनका लागि प्रस्तावित खाकाको निर्णय भइसकेको छ । यही १६ तारिखमा यसबारे परामर्श गरिनेछ । त्यसलगत्तै निर्णय गरेर सार्वजानिक हुनेछ । सो पेपरमा जलवायु परिवर्तनका कारण बदलिँदो विश्वमा नेपालको चुनौती र सम्भावनाबारे उल्लेख हुनेछ । सबै राष्ट्रसँग सामूहिक काम गर्ने विषय नेपालको कार्यपत्रमा उल्लेख हुनेछ ।
मन्त्रालय नै खाली गरेर तपाईंहरू विदेशमा हुने सभासम्मेलनमा जाने गर्नुहुन्छ, त्यसैको पैंचो तिर्न सम्मेलन आयोजना हुन लागेको सुनिन्छ नि ?
यसलाई पैंचोका रूपमा नभई पर्वतीय देशहरूमा चर्किएको वातावरणीय समस्या समाधानतर्फ अर्थपूर्ण बनाउने हाम्रो प्रयास हो । नेपालको जुन भौगोलिक विशेषता, समस्या र अवसरहरू छन् ः त्यसलाई सम्बोधन गर्न कुनै न कुनै रूपमा समान विशेषता बोकेका राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले वातावरण दातामुखी क्षेत्र भएको छ । नेपालले पनि सोहीअनुसार वातावरण क्षेत्रलाई उठान गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको ध्येय हो । नेपालले अहिले संसारमै दिगो विकास प्रणालीको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा छ । त्यस्तो खाले विकासमा पर्वतीय पर्यावरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दा हामीले विश्वलाई नयाँ सन्देश दिन सक्छौं । जलवायु परिवर्तनको जोखिम समाधान र अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने नै नेपालको ध्येय हो । यो कुनै पैंचो सम्मेलन होइन । नेपाल अल्पविकसित देश र पर्वतीय देश भएकाले सो दुवै फोरमलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ सम्मेलन हुन लागेको हो ।
तर विगतदेखि नै तपाईंले बताएजस्तै वातावरणका धेरै कुरा भए पनि दाताबाट आएको रकमलाई तारे होटलमा बैठक र परामर्श गोष्ठीमा खर्चिने गरिएको छ, ठोस काम त देखिएन नि ?
हामीलाई परामर्श पनि आवश्यक छ । प्रविधि झनै आवश्यक छ । मुलुकका लागि उपयुक्त प्रविधि हामीसँग छैन । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने खालका प्रविधि नेपाललाई आवश्यक छ । संस्थागत क्षमता पनि विकास हुनुपर्छ । यसमा दाताहरूबाट सकेसम्म लाभ लिनुपर्छ । सँगसँगै, उपलब्ध स्रोतसाधन र प्रविधिलाई उपयोग गर्ने र ठोस कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सवालमा हामीलाई चर्को चुनौती छ । जलवायु परिवर्तनको असर ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रमा व्यापक रूपमा बढ्दो छ । यो असर कम गर्न कानुन, नीतिनियमका साथै एउटा उपयुक्त संस्थागत संरचना आवश्यक छ । यही क्रममा छिट्टै वातावरण विभाग स्थापना हुँदैछ । यो संस्थाले एउटा अभाव पूरा गर्नेछ । स्थानीय तहमा काम गर्न हामीले अन्य मन्त्रालयमार्फत काम गर्न सक्छौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग निकटमा रहेर हामी धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौं । निकट भविष्यमै स्थानीय तहमा ठोस उपलब्धि देखिने यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदैछन् ।
पर्वतीय सम्मेलन नेपालमै हुँदै गर्दा यहाँ जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा क्रियाशील भनिएका संस्थाहरूको कामकारबाहीबारे अझैसम्म मन्त्रालय बेखबर छ, गैरसरकारी संस्थाको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
प्रश्नजस्तै नेपालमा वातावरण क्षेत्रमा काम गरेको भनिएका संस्थाको भूमिका मिश्रित देख्छु । एनजीओ आईएनजीओहरूले जुन उद्देश्यका साथ आफू क्रियाशिल भएको बताउँछन् ः त्यसअनुसार काम भएको छैन । यद्यपि केही संस्थाहरूले राम्रै काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको कामकारबाहीबारे हामी आफैं सुसूचित छैनौं, जुन हाम्रै कमजोरी हो । केही संस्थाहरूले राम्रै काम गरेका पनि छन् । वातावरण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा क्रियाशील जति पनि संस्था छन्, उनीहरूलाई हामी वातावरणका क्षेत्रमा वास्तविक काम गर्न अपिल गर्छाैं । यी संस्थाहरूले खर्च गर्ने रकम र त्यसको स्रोतका बारेमा अहिलेसम्म जानकारी नभएको साँचो हो । त्यतातिर हामी ध्यान दिँदैछौं ।
यस्ता संस्थाले अपारदर्शी काम गर्दा दाता र राष्ट्र स्वयं झुक्किएको बताइन्छ । दाताले समग्रमा नेपालमा वातावरण क्षेत्रमा यति रकम खर्च भयो भन्ने, तर कार्यान्वयन तहमा शून्य प्रतिफल देखिँदा त राष्ट्रकै बेइज्जती हुने भयो नि ?
नेपालमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क समाजकल्याण परिषद्सँग हुन्छ, तर जलवायु परिवर्तनकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्था र तिनको अवस्थाबारे मन्त्रालयले विवरण राख्न सकेको छैन । यो काम तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कातर्फ, कतिपय कामहरू सरकार आफैं एक्लैले गर्न सक्दैन र हुँदैन पनि । किनकि जुन काममा जुन क्षेत्रको बढी विशेषज्ञता देखिन्छ, त्यही क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा केही गैरसरकारी संस्थाहरूले निकै राम्रो पनि गरेका छन् । अनुसन्धानको क्षेत्रमा सरकार कमजोर नै छ । यो ज्ञानको रिक्ततालाई यी संस्थाहरूले अध्ययनअनुसन्धानमार्फत पूरा गर्न सक्छन्, तर जहाँसम्म कार्यान्वयनमा जाने सवाल छ, अनुसन्धान भएअनुसार जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पु¥याउने खालका कार्यक्रमहरू लिएर जान सरकार विफल नै छ । यो सरकारकै काम हो । अहिले सरकारसँग आवश्यक संस्थागत संरचना नभएकाले समस्या देखिए पनि अबका दिनमा वातावरण क्षेत्रमा विशेष काम हुनेमा म विश्वस्त छु ।
वातावरणको कुरा धेरै भए पनि त्यसले विकासको गतिलाई समेट्न नसकेको बताइन्छ । अहिले पनि कैयौं विकास आयोजनाहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) कै कारण रोकिएका छन्, अब विकास र वातावरण दुवैलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ ?
वातावरण र विकासलाई सँगै बढाउन विश्वव्यापी रूपमै समस्या देखिएको छ । यी दुईलाई समन्वयात्मक रूपमा लैजान हामीकहाँ पनि धेरै चुनौती छन् । अति कम विकसित र विकासशील मुलुकहरूमा यो समस्या बढ्दैछ । विकसित मुलुकहरू विकासको एउटा चरण पुगिसकेकाले उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन । विकासको एउटा गतिमा पुग्नका लागि वातावरण पनि नखल्बलिने र दिगो विकासमा पनि असर नपर्ने गरी काम हुनुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित कामहरू छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न हुनुपर्छ । जहाँसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को सवाल छ ः मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्ति नभएकाले यस्तो स्थिति आएको हो । वातावरण विभाग स्थापना गर्न लागिएको प्रमुख कारण पनि यही हो ।
विभागले कस्ताखाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छ ?
नवीकरणीय ऊर्जा विकास हाम्रो मुख्य ध्येय भएकाले सोहीअनुसारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन्छन् । यसबाहेकका कामहरू अरू मन्त्रालयसँग मिलेर गरिनेछ । वातावरण, प्रकृति संरक्षणलगायतका कार्यक्रम पनि विभागमार्फत आउँदैछन् । सरकारका सबै निकायसँग समन्वयन गरेर स्थानीय स्तरमा काम हुनेछ । कार्यान्वयनमा अन्य मन्त्रालयको भूमिका आवश्यक भएकाले ती मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्दैछौं ।
विकसित तथा औद्योगिक मुलुकले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल रणनीतिक प्रयोग गर्ने र अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले यस क्षेत्रमा काम गर्दा विकासको गति नै बन्द हुने स्थिति देखिन्छ । रणनीतिक स्वार्थ र वास्तविक अवस्था भिन्न रहेको अहिलेको अवस्थामा विकसित राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको कार्बन कटौती गर्नका लागि केही रकम लिएर विकासको गति बन्द गर्न मिल्छ र ?
यो निकै महŒवपूर्ण विषय हो । वातावरण र जलवायु परिवर्तनका बारेमा सबै भूगोलका जनता सजग हुन थालेकाले विकसित देशकै रणनीतिमा हामी अल्झिन चाहन्नौ । दाताबाट केही रकम लिएर वातावरण संरक्षणको नारा लगाउनुको साटो हामी आफैंले मौलिक तरिकाबाट वातावरण संरक्षण र विकासको कामलाई अघि बढाउनुपर्छ । हामीले देखिनेगरी नेपालको वनक्षेत्रलाई बढाउनेतर्फ मात्रै काम गर्ने हो भने पनि हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा कमी भई स्वतः पर्यावरणीय अनुकूलन कायम हुन्छ । यसैगरी, हामीले जति धेरै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्छौं, त्यति नै वातावरण संरक्षण हुन्छ । अहिले ३० प्रतिशत भूभाग ओगटेको जंगललाई ४० प्रतिशतमात्रै पु¥याउँदा पनि वातावरण संरक्षणको हकमा नेपालले ठुलो फड्को मार्न सक्छ । स्वच्छ ऊर्जा संयन्त्रको विकासमार्फत पनि हामीले नेपालको वातावरण संरक्षण गर्न सक्छौं । त्यसैले दातामा मात्र भर नपरी आफैंले काम गर्नुपर्छ । यसलाई विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले कार्बन व्यापारबाट धेरै आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पाउन सकेको छैन, किन ?
यसका लागि नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौतीको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । हामीले अहिलेसम्म ११ वटा आयोजना विकास गरेबापत दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म दुईवटाको मात्र प्रमाणपत्र पाएका छौं । स्वच्छ विकास संयन्त्रको कार्यकारी बोर्डमा हाम्रो कुरा पु¥याएका छौं । त्यसले प्रमाणपत्र नदिएसम्म दाताबाट रकम आउँदैन । अर्को कुरा, हामीले विकास गरेको आयोजनाको प्रकृतिअनुसार पनि रकमको दर फरक हुन्छ ।
अमेरिकालगायतका विकसित देशले कतिपय वातावरणीय सन्धिअभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्, जसका कारण नेपालजस्ता अविकसित पर्वतीय देशहरू ठगिँदै आएका छन्, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले सन्धिबाहिर रहेका राष्ट्रहरूलाई दबाब दिन सक्ला त ?
हामीले अहिले नैतिक दबाबसम्म दिन सक्छौं । तर, सम्मेलनमा जोडदार कुरा उठ्छ । कतिपय विकसित देशहरू आफैंमा पर्वतीय राष्ट्रहरू हुन् । यो मञ्चको उपयोग गरी त्यस्ता औद्योगिक र विकसित देशलाई झकझकाउने काम हुन्छ ।
Proceedings of ICMCCC
Mainstreaming Climate Change into Mountain Deve...
Evaluation Report of ICMCCC
Evaluation Report of International Conference o...
MI Flyer for COP18
Mainstreaming Mountains in the Climate Agenda: ...
Integrated Development SocietyIDS)
Copyright © 2018 - Mountain Initiative | Ministry of Science, Technology and Environment - All Rights Reserved.
Website Last Updated on: Thursday 28th February, 2013, 12:53 PM